एनआईसी एशिया लघुवित्तको आईपीओ असार १० गते निष्कासन सुरु –
एनआईसी एशिया लघुवित्तको आईपीओ असार १० गते निष्कासन सुरु
एनआईसी एशिया लघुवित्तको आईपीओ असार १० गते निष्कासन सुरु: एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्थाकोे आईपीओ असार १० गतेदेखि निष्कासन हुने भएको छ । विक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहको छ । कम्पनीले ४७ लाख ५५ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो ।
जसमध्ये कम्पनीले ७४ हजार कित्ता कर्मचारीहरुको लागि, २ लाख ३७ हजार ८०० कित्ता सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्याएको र बाँकी रहेको ४४ लाख ४३ हजार २०० कित्ता सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गर्नेछ । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ४५ लाख रहेको छ । आईपीओ निष्कासन बाँडफाँट पश्चात उक्त पूँजी रू. १ अर्ब ४८ करोड पुग्नेछ ।
आईपीओ निष्कासन बन्द मिति छिटोमा असार १४ र ढिलोमा असार २४ गतेसम्म रहेको छ । यस आईपीओमा आवेदकले न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम २ लाख कित्ताको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै आवेदकले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि आस्वा सेवामा सहभागि बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यलयहरुबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।
कम्पनीले हालसम्ममा ७० ओटा शाखा कार्यालयहरुबाट लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीले चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा रू. ११ करोड १२ लाख नाफा कमाएको छ । सोही अवधिमा कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ११० दशमलव ४३ पुगेको छ । कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको आईपीओलाई केयर रेटिङ नेपालले ग्रेड ४ रेटिङ प्रदान गरेको छ । ग्रेड ४ रेटिङले कम्पनीको आधारभूत पक्ष औषतभन्दा तल रहेको देखाउँछ ।
जोरपाटी–गोकर्ण–सुन्दरीजल सडक विस्तार शुरू: जोरपाटी–गोकर्ण–सुन्दरीजल सडक विस्तारको काम शुरू भएको छ । गत आर्थिक वर्षमै सक्ने गरी विसं २०७२ मै ठेक्का भएको सात किमी सडक पाँच वर्षदेखि अलपत्र छ । सडकको दायाँबायाँ घर भएका स्थानीयवासीले मुआब्जा नदिई काम अघि बढाउन नदिने भनी विरोध गरेपछि विस्तार हुन सकेको थिएन ।
जेठ पहिलो साता नगरपालिका–४ र ७ मा गरी दुईजना सङ्क्रमित भएपछि दुवै वडा सिल गरिएको थियो । संक्रमितसँग सम्पर्कमा आएका र परिवारका सदस्यलाई पनि आरडीटी एवं पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि सडकको अघि बढेको नगरपालिकाका प्रवक्ता मनोजकुमार ढुङ्गानाले बताए ।
केन्द्रविन्दुबाट दायाँबायाँ ११÷११ मिटर गरी २२ मिटरको सडक बनाउने ठेक्का काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले गरेको थियो । ७ किमीको दूरीमा पर्ने करीब ९०० घरका धनीले ठेक्का अनुसार विस्तार गर्ने भए मुआब्जा दिनुपर्ने माग गरेपछि घर भएको स्थानमा केन्द्रविन्दुबाट दायाँबायाँ ७÷७ मिटर विस्तार गर्ने, सार्वजनिक जग्गा बन्दाबन्दीका क्रममा सडकमा पर्ने रूख हटाए पनि विद्युत्को पोल, तार लगायत संरचना हटेको छैन । सडकको काम नसकिँदा यस वर्ष पनि वर्षाद्का समयमा हिलो र हिउँदमा धूलोमा यात्रा गर्न बाध्य छन् ।
भएका स्थानमा भने ११÷११ मिटर नै विस्तार गर्ने सहमति भएको नगरपालिकाका प्रवक्ता ढुंगानाले जानकारी दिए । सहमतिसँगै चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म काम सक्नेगरी म्याद थपिएको थियो । रू. ५८ करोड लागतमा भइरहेको काम असार मसान्तसम्म नसकिने निश्चित भएको विस्तार आयोजना प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले बताए ।